Alcatel 1X: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း | Androidsis
Alcatel 1X: Android Go ဖြင့်ဖုန်းအသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
MWC 2018 စတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်ဖုန်း၏မြင်ကွင်းကျယ်တွင်သတင်းများနှင့်ပြည့်နေသည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းပြင်ဆင်နေကြသည်။ အဓိကကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေကဒီနေ့တစ်လျှောက်လုံးမှာသူတို့ဖုန်းအသစ်တွေကိုငါတို့ကိုပေးတယ် အခမ်းအနားတွင်ပါ ၀ င်မည့်တံဆိပ်တစ်ခုမှာ Alcatel ဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ယင်း၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နေပြီး၎င်းတို့သည်ဤ Alcatel 1X ကဲ့သို့သောမော်ဒယ်လ်သစ်များနှင့်အတူတူပင်.
ကုမ္ပဏီသည်စမတ်ဖုန်းအသစ်သုံးမျိုးကိုပြသပြီးနောက်တစ်လအကြာတွင်ဖြစ်သည်။ ငွေအတွက်ကောင်းသောတန်ဖိုးကမ်းလှမ်းရန်ရှာကြံသုံးခုအကွာအဝေး။ ဒီတော့သူတို့ကစျေးပေါတဲ့ဖုန်းတွေ၊ ဒီ Alcatel 1X အကြောင်းပြောနိုင်တဲ့အရာ။
၎င်းသည်မကြာသေးမီလများအတွင်းအရေးအကြီးဆုံးလမ်းကြောင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်စင်စစ်သင်တို့သည်စကားဖြောင့်ကြပြီ။ အချိုး 18:9အချိုးအစားနဲ့မျက်နှာပြင်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Android မှာသုံးနိုင်ပါတယ် တစ် ဦး operating system အဖြစ်။ ဒါကြောင့်သူက operating system ရဲ့ light version နဲ့အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်ထားခဲ့ပါ ဒီ Alcatel 1X ၏အပြည့်အစုံ:
Alcatel 1X နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
operating system Android Go (Oreo Edition)
ဖန်သားပြင် 5.34 လက်မ FWVGA + (960 × 480) 18: 9
Processor ကို Mediatek MT6739 Quad-core 1.3GHz
ရမ် 1 GB ကို
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 16 GB + 128 Gb microSD
နောက်ကင်မရာ 8 MP Flash မီး
ရှေ့ကင်မရာ5MP Led Flash ကို
ဆက်သွယ်မှု LTE Cat4 WiFi Bluetooth 4.2 GPS FM ရေဒီယို MicroUSB minijack
ဘက်ထရီ 2.460 mAh ဘက်ထရီ
ရှုထောင့် 147.5 70.6 9.15 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 151 ဂရမ်
စြေး 99 99 ယူရို
သင်မြင်သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းအတွက်အလွန်ပြည့်စုံသောနိမ့်ကျသောဖုန်းတစ်လုံးနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် ဒီ Alcatel 1X ဟာ Android Go Oreo Edition နဲ့အတူပထမဆုံးဈေးကွက်ထဲကိုဝင်ရောက်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီဟာကကတိပေးပြီးအိန္ဒိယ၊ တရုတ်လိုစျေးကွက်အချို့မှာကောင်းကောင်းရောင်းနိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်။
Alcatel 1X ကိုworldwideပြီလမှစပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရောင်းချနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ဒါကြောင့်တစ်လကျော်စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကိစ္စဖြစ်သည်။ တိကျတဲ့ရက်စွဲကိုဒီလမှာထုတ်လွှင့်ဖို့ဖော်ပြမထားပါဘူး။ သို့သော်၎င်းသည်မကြာမီလူသိများလာမည့်အရာဖြစ်သည်။
အရောင်သုံးမျိုးဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ချောချောမွေ့မွေ့ပြီးသောရွှေရောင်မော်ဒယ်လ်တစ်လုံးနှင့်အနက်ရောင်နှင့်အပြာရောင်ရှိသည့်ကတ္တီပါကျောက်ပြားနှစ်ချောင်း။ ၎င်းသည်စျေးနှုန်းကိုယူရို ၉၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်. ဖုန်းကိုမင်းဘယ်လိုထင်လဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Alcatel 1X: Android Go ဖြင့်ဖုန်းအသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Alcatel သည်၎င်း၏စီးရီး ၁၊ ၃ နှင့် ၅ သစ်ကို MWC 1 တွင်တင်ပြသည်
နောက်ဆုံး၌ Android P သည် OLED အမျိုးအစားဖန်သားပြင်များအတွက်မှောင်မိုက်သောအခင်းအကျင်းကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ